Inkanyezi yePleiades: izici, ukubonwa kanye nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sigxila emhlabeni wesayensi yezinkanyezi ukuchaza iqembu lezinkanyezi elaziwa kakhulu elinikezelwe kwiplanethi yethu. Imayelana ne- izinkulungwane. Iqoqo lezinkanyezi elivuliwe eliseduze neplanethi yoMhlaba futhi yaziwa njenge-7 Cosmic Sisters futhi iyindoda yangaphambi kweSpanishi eyaziwa ngama-whitecaps ayisikhombisa. Kulula ukukhomba iqoqo elivulekile esibhakabhakeni sasebusuku ngoba lisondele kakhulu eMhlabeni. Kungabonakala enyakatho Nenkabazwe kumlaza i-Taurus ebangeni eliyiminyaka engaba ngu-450 yokukhanya.
Kule ndatshana sizokutshela zonke izici, imvelaphi kanye nezinganekwane zePleiades.
2 Izinganekwane zePleiades
3 Ukuqaphelwa kwamaPleiades
4 Izifundo zokubheka
Iqoqo lezinkanyezi elincane kakhulu ngoba izinkanyezi zineminyaka engaba yizigidi ezingama-20 kuphela ubudala. Eqoqweni elivulekile singathola izinkanyezi ezizungeze ama-500-1000 ezinezici ezishisayo zohlobo B zonke zitholakala enkanyezini yeTaurus. Sizochaza izinhlobo eziyinhloko zezinkanyezi esingazithola kuma-pleiade nokukhanya kwazo:
I-Alcyone: Yinkanyezi ekhanya kakhulu kunazo zonke ezasePleiades futhi itholakala ebangeni eliyiminyaka engaba ngu-440 yokukhanya ukusuka kwiplanethi yethu. Ubukhulu bayo obubonakalayo bungu + 2.85 futhi iyinkanyezi ecwebezela ngokuphindwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-1000 kunelanga, ngokuba mkhulu ngokuphindwe kayishumi.
I-Atlas: iyinkanyezi yesibili egqame kakhulu kwiqoqo lePleiades futhi itholakala ebangeni leminyaka ekhanyayo engama-440, njenge-Alcyone. Inobukhulu obusobala obungu- + 3.62.
I-Electra: Yinkanyezi yesithathu uma siyilayisha ngokugqama kwezinga futhi itholakala ebangeni elifanayo nakwezinye ezimbili. Ubukhulu bayo obubonakalayo bungu-3.72.
I-Maia: ingenye yezinkanyezi ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka futhi itholakala ebangeni elicishe libe yiminyaka engama-440 yokukhanya ngobukhulu obubonakalayo obungu- + 3.87.
I-Merope: Ukulandelana kokukhanya kungokwesihlanu futhi kuyinkanyezi engaphansi enombala omhlophe okwesibhakabhaka ngobukhulu obubonakalayo obungu- + 4.14, etholakala ngokuncane noma ngaphansi ebangeni elifanayo phakathi kokunye.
I-Taygeta: kuyinkanyezi kanambambili enobukhulu obubonakalayo obungu- + 4.29 futhi esondele ngandlela thile kwisistimu yelanga, ngokuba sebangeni eliyiminyaka engu-422 yokukhanya.
UPleione: iyinkanyezi ebangeni elifana nelinye futhi icwebezela ngokuphindwe izikhathi eziyi-190 kunelanga. Inobubanzi obuphindwe izikhathi ezingama-3.2 futhi ijubane layo lokujikeleza lishesha ngokuphindwe kayikhulu kunelanga.
UCelaeno: Kuyinkanyezi kanambambili engaphansi kombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Ubukhulu bayo obubonakalayo bungu -5.45 futhi itholakala ebangeni leminyaka ekhanyayo engama-440.
Njengoba ungalindela, iningi lamaqoqo ezinkanyezi esibhakabhakeni anezinganekwane zawo. Kukhona izinganekwane ezahlukahlukene ngamaPleiades ezikhuluma ngobukhona bazo endaweni yesibhakabhaka. Enye yalezi zindaba ezinganekwane kulapho iPleiades isho amajuba kanti odade abayisikhombisa kuthiwa bayimibono ye-oceanid Pleione ne-Atlas. Odade kwakunguMaya, Electra, Taigete, Asterope, Merope, Alcíone noCelaeno, baphendulwa izinkanyezi nguNkulunkulu uZeus, njengendlela yokuzivikela ku-Orion owayebasukelaKuze kuthiwe kuze kube namuhla u-Orion uxosha odade esibhakabhakeni sasebusuku.
Inganekwane futhi ithi onkulunkulu abahlukahlukene base-Olympian abanjengoZeus, uPoseidon no-Ares bayengwa ukukhanga kwalabo dade futhi bathela izithelo ebudlelwaneni. UMaya wayenendodana noZeus, futhi bamqamba ngegama uHermes, uCeleno wayenoLico, uNicteo no-Eufemo benoPoseidon, u-Alcíone naye wanikeza uPoseidon indodana, abayiqamba ngokuthi uHirieo, u-Electra wayenamadodana amabili noZeus ambiza ngoDárdano noJasión , USterope wazala u-Oenomaus ngo-Ares, uTáigete wayeneLacedemon noZeus; ukuba nguMerope kuphela odade basePleiadian abangazange balondoloze ubudlelwano noNkulunkuluNgokuphambene nalokho, wayenobudlelwano kuphela nomuntu ofayo, uSisyphus.
Enye ingxenye yezinganekwane isitshela ukuthi odade basePleiadian banqume ukuthatha impilo yabo njengoba babezizwa becindezeleke kakhulu ngakho konke okwenzeka nobaba wabo u-Atlas kanye nokulahlekelwa kwaboSisters the Hyades. Lapho esezozibulala, uZeus wanquma ukubanika ukungafi futhi Wazibeka esibhakabhakeni ukuze aziphendule izinkanyezi. Ngakho-ke kuzalwa izinganekwane zaleli qoqo lezinkanyezi esibhakabhakeni.
Njengoba sishilo ngaphambili, iPleiades isondele kakhulu kwiplanethi yethu, ngakho-ke kulula kakhulu ukuyibona esibhakabhakeni. Iqoqo lezinkanyezi elibhekwa njengendawo elula. Izinkanyezi zayo eziyinhloko zikhanya futhi ziyabonakala kalula. Kufanele ucabangele ireferensi yokuthola iqoqo lezinkanyezi futhi ukusebenzisa umhlahlandlela wezinkanyezi weTaurus ukuze izingqinamba zibonakale kalula, ngoba zingaphakathi.
Imvamisa izinkanyezi ezi-6 kuphela ezingabonakala ngamehlo, kepha uma ubusuku bucacile, kunokukhonjwa okuningi. Ukuthola kahle ama-pleiade, ungasebenzisa i-Orion njengenye inkomba. Ingenye yezinkanyezi ezithandwa kakhulu futhi isebenza njengendawo yokuma ukufinyelela leli qoqo lezinkanyezi. Zitholakala ngenhla kwe-Orion, ziwela umlaza i-Taurus futhi ziyiqembu lezinkanyezi eziluhlaza okwesibhakabhaka.
Ingxenye enhle kakhulu yezinkanyezi eyaziwa njengephuzu eliphakeme kakhulu oyikho ngenyanga kaNovemba. Yilapho kungabonakala kahle kakhulu. Uma ibukwa ngesibonakude esikhokhelwayo kungahlukaniswa ngokusobala ukuthi zizungezwe izinto ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka lapho kukhanya khona ukukhanya kwezinkanyezi futhi kuzungezwe i-nebula.
Leli qoqo lezinkanyezi liyathakazelisa impela ekutadisheni ngezinkanyezi zesimanje, yingakho namuhla ziseyingxenye yophenyo lwezinkanyezi oluzungeze isikhathi sokuphila nokuthi liyini ikusasa lalezi zinkanyezi ezinhle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi ziyini iPleiades nokuthi ziyini izici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Izihlwathi